Noma yimuphi ummeleli wobulili bubuhle ufuna ukuba ngomzimba omuhle. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi inkinga ayixhomekile ebukhoneni isisindo okweqile, kodwa ukuthi yini ngokulinganayo basakaza wonke umzimba. Ikakhulu abathintekayo ezindaweni ezifana ezinqulwini esiswini. Lokhu kuthinta hhayi kuphela ukubonakala, kodwa futhi kuwuphawu lokuthi umzimba kuhlulekile. Ingabe egijima ukususa esiswini futhi izinhlangothi? Kuyasiza, kodwa kuphela uma kukhulunywa naye kahle futhi sina kulo mbuzo.
Okwenza a run for impilo
Uma umgomo futhi iqale ukusebenza ekuseni, kuyobe sekuba i-kungenzeka inciphise amafutha emzimbeni. Into esemqoka - ukuqonda ukuthi ukugijima kuzosiza ukususa isisu okhalweni, wena kuphela kudingeka ufunde indlela yokukwenza. Ngenxa yalokho, yini kuphela uthole umzimba amahle ukwandisa yabo ukuzethemba, kodwa futhi zisindise kusukela lezi izingozi ezingaba khona:
kuncishiswe ingozi sikashukela;
Uzokwazi ukuze sigweme izinkinga ezifana amaqanda polycystic;
Vegetable engadini ngokwayo kusukela ukuthuthukiswa ezahlukene izifo abanomfutho wegazi ophakeme;
ukususa isisindo okweqile kungasiza ekuvimbeleni isifo sohlangothi kanye yinhliziyo.
Calorie ukusetshenziswa namafutha esivuthayo ngesikhathi egijima
Zeqe - umsebenzi ngokomzimba ukuthi kuthinta wonke umzimba. Imisipha uqale bezikhandla, futhi inqubo esivuthayo fat. Ingabe egijima ukususa isisu izinhlangothi? Uma isizathu kusukela umbono wezokwelapha, ngesikhatsi asebenzayo umsebenzi ihora ashisiwe cishe 55-78 amagremu of fat. Kuphuma 700 kcal. Ukhuluphele kancane kancane uqala ukuhamba, isinyathelo sokuqala kusukela ezindaweni inkinga.
Nokho, ungalindeli ukuthi ngesonto Utawutfolani sibalo amaphupho akho. Lena akuyona ngakho. umzimba enhle kuthatha isikhathi. Kuphela ukugijima njalo, ngeke sifinyelele elamukelekile.
Awukwazi ukusebenzisa ngosuku lokuqala amahora 2-3 ukuze usebenzise ama-kilojoule ngaphezulu. Lokhu kuyoholela ekuthuleni iqiniso lokuthi imisipha ubuhlungu, futhi ngakusasa ekuseni unomsebenzi ngisho sakugcina ngokomzimba ongakwenza.
Uphi run engcono - ekhaya noma ngaphandle?
Uma unquma ukuthi uzoqala ukugijima ke kudingeka unqume ukuthi ikuphi okungcono ukukwenza. Kukhona izinketho ezimbili yilezi:
Thenga i-treadmill kanye umkhuba ekhaya. Lapha kunezinzuzo zako. Ungakwazi ukubhekana nsuku zonke, naphezu ngaphandle sezulu.
Running ngaphandle Kulula futhi kumnandi. Ikakhulukazi phakathi nenkathi efudumele ekuseni. Kodwa sezulu esibi, nawe ngeke bakwazi ukuqhubeka ukuqeqeshwa.
Ingabe Running ukususa belly fat? Kuyasiza, kodwa kuphela uma uzokhokhela ngenkathi ukugijima nsuku zonke. Qala ngezinto ezincane, bonisani imizuzu 15-20. Khona-ke emzimbeni kancane kakhulu, kungenzeka ukwandisa umthwalo.
Kanjani ukusebenzisa ukunciphisa umzimba, ukuthi ingasheshi noma abazili ngani na?
Wonke umuntu uyazi ukuthi ngokushesha siqalisa, kilojoule ngaphezulu wena bashise. Kodwa uma unquma ulahlekelwe isisindo, awukwazi nje ukunikeza umzimba i umsebenzi okukhulu. Okokuqala, uyobe uphelelwa umusi ngokushesha. Okwesibili, ijubane kungenziwa alternated. Ngokwesibonelo, qala a gijima, imizuzu ke ezimbalwa ukuze kusheshiswe ke sigijima futhi. Ngakho kakhulu kulula ukubhekana nazo, futhi umphumela uyoba obuphathekayo.
Uma ecabanga ukuthi kungenzeka ukususa isisu ezinhlangothini ukugijima, kusho kunenkinga lesi sibalo, kanye nesidingo esiphuthumayo ukuba aqale ukuzilolonga. Ukugijima ngeke kuphela usizo ukuqeda fat ngokweqile ezindaweni inkinga, kodwa futhi usiza ukuqinisa impilo.
Lapho kuyoba umphumela?
Ingabe egijima ukususa isisu izinhlangothi? Nakanjani, yebo. Nokho, ubulili fair ngizibuze esingakanani kuzobonakala imiphumela yokuqala.
Lapho ukugijima nsuku kungakapheli inyanga uzophawula ngokwakho ukuthi lesi sibalo yokutholwa impumuzo emehlweni nomusa kakhudlwana fat umzimba akuyona kangaka.
Ngaphezu kwalokho, ngibalekela kwesisindo kunezinzuzo zako. Ukhuluphele ke emuva ngeke abuyele - endaweni yawo kuyoba kwemisipha. Futhi kwenzekani ngemva ukudla isikhathi eside? Isikhathi esining impela thina yizinkulumo futhi baqala ukudla konke Ubamba iso lakho. Ngenxa Kilos kuyo leyo ndawo, kanti Ukudla owawuse ngeze.
A imithetho embalwa eyisisekelo ziyokusiza ekuhleleni iphelela yakho ngendlela efanele:
Izicathulo kanye izingubo kufanele ukhululekile ngoba ungakwazi ukusebenzisa kuphela uma uzizwa ukhululekile.
amahora amabili ngaphambi uhlela ukuqala Amazing, zama ukuba angadli. esiswini Egcwele ukhawule ukunyakaza futhi kwakha umuzwa wobukhulu.
Ngemva kokuqeqeshwa kungcono, futhi, nje ungenciki ku ukudla. Linda amahora ambalwa. Emva umsebenzi imisipha kilojoule isikhashana, kodwa uma nje ukudla, amandla ke iyothathwa hhayi fat, futhi kusukela ukudla washisa.
Ungakhohlwa ukuthatha nawe ku uyibanga ibhodlela elincane lamanzi.
Kungakhathaliseki ukugijima kususa isisu izinhlangothi? Yiqiniso yebo, njengabanye umsebenzi. Into esemqoka - ukuhlela amakilasi kahle.
Ingabe kufanele ngingene unamathele ukudla?
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukunciphisa umzimba ngosizo ebaleka kungaba futhi ngaphandle kokuba ahlale edla ukudla. Nokho, akuyona. Ukuvivinya umzimba kuthatha amandla amaningi, ngakho umzimba njalo abadinga ukunakekelwa. Lokhu akusho ukuthi manje une ukuya ukudla okuqinile. Lokhu amandla ngeke ngokwanele, futhi uzoba njalo sizizwe sikhathele. Okudingekayo - is ukwenza ukudla okufanele.
Indlela ukuze adle:
Hlukanisa usuku lonke ukuze ukudla ezimbalwa (5-6).
Udinga ukudla izingxenye ezincane.
Zama ukunciphisa ngokwakho ukusetshenziswa imikhiqizo ebhikawozi ngenxa bathuthukisa isisindo somzimba.
Awukwazi ukudla ngaphambi nangemva ukugijima.
Yidla izithelo nemifino - ziqukethe ukubunjwa yabo wonke lamakhono abalulekile ukuze ukusebenza emzimbeni evamile.
ushukela ukusetshenziswa kufanele kube okulinganiselwe. Kunalokho, lo itiye ungakwazi ukwengeza uju, kuyasiza kakhulu.
Yidla ushizi nezinye nemikhiqizo yalo - okondliwa kulo amathambo futhi unike umzimba amandla.
Phuza ngosuku okungenani ezimbili amalitha amanzi (lapho kushisa ngaphezulu).
Yenqaba eziluthayo (ukubhema, utshwala).
Ingabe egijima ukususa isisu izinhlangothi? Awunayo ukusiza uma kungukuthi kulinganiswa kahle ukudla. Buyekeza ekudleni kwakho kwansuku zonke, futhi kuphela bese uqhubekela phambili izivivinyo.
Ungakhohlwa ukuthi run kudingeka nje kuphela ukunikeza lesi sibalo sezwe enhle, kodwa futhi nempilo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ngabe kungenzeka ukususa belly fat nendlela ukusebenzisa kahle. Qeqesha umzimba wakho nsuku zonke, futhi ngokushesha uyobe umangale ukuthi elula efana Uma unganakile, inqubo isisindo ukulahleka anganika imiphumela emihle kakhulu. Sebenzisa amathiphu kanye nemithetho ezichazwe ngenhla, hhayi pozhalaete eqale kosuku ngalunye ukugijima.
Baking soda njengendlela ulahlekelwe isisindo: Yinganekwane Noma Yiqiniso?
Ukuhlinzwa Breast nokwengezwa: Izinkinga Ziyenzeka
Indlela Qinisa Chest